हेड टु हेड : ब्राजिल र पेरुमा को बलियो? - नेपाल समय
हेड टु हेड : ब्राजिल र पेरुमा को बलियो?
एजेन्सी- घरेलु टोली ब्राजिलले कोपा अमेरिकाको उपाधिका लागि आज (आइतबार) पेरुसँगै खेल्दै छ । खेल नपाली समय अनुसार राती १:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
समूह चरणको खेलमा ब्राजिलले पेरुलाई ५-० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो । त्यस्तैले पेरु समूह चरणको हारको बदला लिन चाहन्छ । यता ब्राजिल भने समूह चरणको फराजिलको जितको उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रिने छ ।
ब्राजिल १२ वर्ष पछि कोपा अमेरिकाको उपाधिका लागि फाइनल पुगेको छ । पेरु भने ४४ वर्ष पछि प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश गरेको हो । यसअघी दुई पटक मात्र फाइनल पुगेको पेरुले दुबै पटक उपाधि जितेको थियो ।
पहिलो पटक सन् १९३९ मा कोपा अमेरिकाको उपाधि जितेको पेरुले सन् १९७५ मा दोस्रो पटक उपाधि जितेका थियो । ब्राजिलले भने ८ पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि जितेको छ । ब्राजिलले जारी प्रतियोगितामा १० गोल गरेको छ भने पेरुले ६ गोल गरेको छ ।
ब्राजिल र पेरुले हाल सम्म ४५ पटक एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । सन् १९३६ देखी २०१९ सम्म एक अर्कासँग आमने सामने हुँदा ब्राजिल बलियो देखीएको छ । ब्राजिलले ४५ भेट मध्यमा ३२ भेटमा जित निकालेको छ भने ९ भेट बराबरीमा रोकिएका छन् ।
त्यस्तै मात्र ४ भेट ब्राजिलले पेरुसँग गुमाउँन पुगेको छ । सन् २००९ देखी पछिल्ला ६ भेटमा ब्राजिलले ५ जित सनकालेको छ भने एक खेल मात्र गुमाएको छ । १ अप्रिल २००९ मा भएको भेटमा ब्राजिलले ३-० को जित निकालेको थियो भने १४ जुन २०१५ मा भएको भेटमा २-१ ले जितेको थियो ।
त्यस्तै १७ नोभेम्बर २०१५ मा नै भएको अर्को भेटमा ३-० को जित निकाल्दा १२ जुन २०१६ मा भने ब्राजिल पेरुसँग १-० ले पराजित भएको थियो । १५ नोभेम्बर २०१६ मा भएको भेटमा २-० ले विजयी भएको ब्राजिलले जारी कोपा अमेरिकाको समूह चरणको भेटमा ५-० को फराकिलो अन्तरले पराजति गरेको थियो ।